Duurjoogta Soomaaliya - Wikipedia
Duurjoogta Soomaaliya (; ) waa dhamaan noolaha ku dhaqan deegaanada wadanka Soomaaliya, kuwaasi oo ka kooban dhir iyo xayawaan. Duurjoogta Soomaaliya waxay ka mid tahay kuwa ugu qanisan ee kala jaadka iyo noocyo badan leh taasi oo la xidhiidha Juqraafiga Soomaaliya, sida cimilada, degaanka iyo jawiga.
Intaas waxaa dheer, wadanka Soomaaliya waxay hooy u tahay tiro badan oo shimbiro kala nooc ah, kuwasi oo ku dhaqan xeebaha, buuraha iyo gayiga kala gedisan. Sida lagu sheegay tiro koob caalami ah, Soomaaliya waxaa ku nool ilaa 727 nooc oo shimbiro ah; iyo wax ka badan 177 nooc oo xayawaan naasley ah. Yaxaaska ayaa caan ku ah koonfurta Soomaaliya. Sanadkii 2006dii waxaa tirokoob lagu ogaaday in Soomaaliya ugu yaxaas badan tahay qaarada Afrika.
Guud ahaan, wadanka Soomaaliya waxaa laga helaa noocyo badan oo dhir ah; kuwaasi waxaa ka mid ah sogsogta, galoolka, qudhaca, baxarasaafka, dhirta khudaarta, dhirta midhaha iyo noocyo badan oo kale. Intaas waxaa dheer oo wadanka Soomaaliya laga helaa noocyo badan oo xayawaan iyo xoolo ah; kuwasi waxaa ka mid ah shimbiraha, duurjoogta, xamaaratada, duurgaleenka iyo bahalo kale oo badan.
Nasiib daro, dagaalkii sokeeye wuxuu khasaare weyn u geeystay nolosha duurjoogta Soomaaliya. Waxaa dhintey tiro badan oo xayawaan iyo dhir leh, waxaa si khalad ah loo isticmaalay khayraadka duurjoogta ee wadanka, iyo tiro badan oo xayawaan u baxsatey deegaano ka baxsan wadanka.
1 Juquraafiga Soomaaliya
Faahfaahsan: Juqraafiga Soomaaliya
Soomaaliya waa dal dhaca bariga qaaradda Afrika ee aagga loo yaqaan Geeska Afrika. Waxa ay xad-wadaag ka yihiin Yemen dhanka Gacanka Cadmeed, waxaa sidoo kale bari ka xigta Badweynta Hindiya dhanka galbeedna waxa ka xiga Itoobiya iyo Jabuuti koonfur galbeedna waxaa ka xiga Kiinya. Soomaaliya waa midda dhanka bare ee ugu fog Afrika, bedkeedu wuxuu gaarayaa 637,540 kiiloomitir labajibbaaran.
Wadanka Soomaaliya waxaa ku nool noocyo badan oo xayawaan naasley ah sababtoo ah meesha uu juquraafi ahaan wadanku ku yaalo ahaa taageeraysa nolosha xayawaankan. Dhamaan Gobolada Soomaaliya waxaa laga helaa noocyo kala duwan oo naasley ah; kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah: harimacadka, libaaxa, halgeriga, daanyeerka, maroodiga, deerada, waraabaha, dameer duurjoogta, dameerfarowga, goronyada, Goroyo Soomaali, Yeeyga, sagaaro, bakeyle, Xoor-dubbur, garanuug,ta ayga, doofaarka, karkaraha, dacawada, noocyo badan oo daanyeer ah, iyo kuwo kale oo badan.
Xayawaanada laga helo Soomaaliya oo kali ah waxaa ka mid ah:
Garanuugta waxaa laga helaa Soomaaliya oo keli ah.
Soomaaliya waxaa ku nool geela ugu badan aduunka
Wadanka Soomaaliya waxay hooy u tahay ilaa 727 nooc oo shimbiro ah, kuwasi waxaa ka mid goronyoda, qooleyda, haada, gorgorka, xuurta iyo noocyo kale oo badan.
Shimbirahan waxaa laga helaa geyiga Soomaaliya oo keli ah:
Yaxaasku caan ayuu ka yahay koonfurta Soomaaliya.
Wadanka Soomaaliya waxaa ku dhaqan ilaa 235 nooc oo xamaarato ah, kuwaasi oo intooda badan ku dhaqan yihiin Waqooyiga Soomaaliya. Sidoo kale, wadankani waxaa ku nool yaxaaska ugu badan wadanada Afrika. Yaxaaska laga helo Soomaaliya markuu qaangaadhka yahay wuxuu gaadhaa 5 ilaa 7 mitir dherer.
Noocyo kale oo xamaarato ah ee laga helo wadanka Soomaaliya waxaa ka mid ah jebisada (Saw-scaled Viper), maska, golcasta, maydhmeydhka, mulaca, maxaasta, iyo noocyo badan oo kale.
Wadanka Soomaaliya wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer qaarada Afrika, taasi oo dhan 3,300 kilomitir oo dhinaca ku haysa Badweynta Hindiya. Badaha Soomaaliya waxaa ka buuxa noocyo badan oo kaluun iyo noole kale ah, kuwaasi oo intooda ugu badan ka soo hijrooda bada badhtankeeda si ay ugu tafiirmaan xeebta diiran.
Kaluunka u khaaska ah wadanka Soomaaliya waxaa ka mid ah:
Dhuldaaqsiimeedka Dooxada Nugaal.
↑ Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (Eds.)(2005) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. Third Edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Duurjoogta_Soomaaliya&oldid=161795"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Oktoobar 2016, marka ee eheed 05:20.